လေဟာနယ် Bag, ဇစ်အိတ်, မျိုးတွင်အိတ် - Baolai
We have more than 17 years of professional experience in the packaging. With perfect skill and high technology equipment, we can do design,manufacture,printing,after-process and supply you high quality bags with excellent service. Henan Baolai Packaging Co., Ltd is main OEM & ODM manufacturer in China. We has been ex ကported our bags to more than 45 countries from now.
လက်ကား Plastic Polymer Pouch Mask ထုပ်ပိုးမှု ...
နို့ထုပ်ပိုးရန် Spout ပါသောအိတ်နှင့်မတ်တပ်ရပ်ပါ။
သေတ္တာထဲတွင်ဝိုင်စိတ်ကြိုက် Leak Proof Aluminium Foil ...
Brc Standrad စိတ်တိုင်းကျလိုဂိုတံဆိပ်သုံးဘက်ရိုက် နှိပ်၍ ပင်လယ် ...
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအရောင်စုံပုံနှိပ်ထားသောအမဲသား Jerky Doypa ...
Nozzl နှင့် ၁၀၀ မီလီလီတာထုတ်ထားသောအိတ်
ထည့်သွင်းနိုင်သောအိတ် ECO ပါ ၀ င်သောအဆာပြေထုပ်ပိုးထုပ်ပိုး ...
မြေဆွေးထည့်နိုင်သောအိတ်စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းနိုင်သော PLA plasti ...
၂.၅ ကီလိုဂရမ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစားအစာအိတ်အလူမီနီယံသတ္တုပြားပြားအောက်ခြေ ...
customizd eco friendly 10ml reusable food spout ...
အလူမီနီယံသတ္တုပြား စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုဖျော်ရည်အိတ်ရပ်တည်ချက် ...
reusable juice spout ပုံစံ spout pouch အစားအစာ mil ...
1 ကီလိုဂရမ် ဘေးဘက် gusset ပလပ်စတစ် ကြမ်းပြင်ပစ္စည်းများ တွဲဖက်...
လက်ကားဈေး တရုတ် 500gms Spout Pouch Pack f...
ပျက်စီးနိုင်သော Package Charcoal Packaging Bag Quad...
လက်ကား Matte Navy 10X12.5cm Drip Coffee Sach ...
MOQ 1000 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာဘေးထွက် Gusset Bag ကြောင်အစားအစာ Pla...
Matte အနက်ရောင်အခြောက်အစားအစာ Aluminium Foil မတ်တပ်ရပ် ...
MOQ 500 စိတ်ကြိုက်အာလူးချစ်ပ်အိတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ် F ...
စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော Aluminium Foil အိတ် Stand up Pouch ...
စိတ်ကြိုက် 180ml Juice Mylar Bag 200ml Bottle Shapi ...
ပီလောပီနံဆွေး စက္ကူထုပ်ပိုးအိတ် အစားအစာ Degra...
1.5kg 2kg 2.5kg 5kg အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အစာအိတ် ခွေးအစာ packa...
လမ်းပေါ် DuYing, အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်, Zhengzhou နန်, တရုတ်
အရည်အသွေးကောင်း အစားအသောက် အိတ် အစုံရောင်းပါတယ်...
မတူကွဲပြားတဲ့ Packagi တွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေ...
Biodegradable နှင့် compostable အိတ် packagi ...
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2019: All Rights Reserved ။ အသားပေးထုတ်ကုန်များ၊ မြေပုံအညွှန်း ၊ မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
အိတ်သတ္တုပါးလူမီနီယမ်, လူမီနီယမ် Pouch , အလူမီနီအိတ် , လူမီနီယမ်အိတ် , လူမီနီယမ်အိတ် , လူမီနီယမ်ပက်ကေ့ ၊ အားလုံးထုတ်ကုန်များ